Mamela ny Adtech hamono ny tombotsoany ny mpanonta | Martech Zone
Ny tranonkala no fampitaovana mavitrika sy mpamorona indrindra hatramin'izay. Ka raha resaka doka nomerika dia tokony tsy hisy fetrany ny famoronana. Ny mpamoaka boky iray, amin'ny teôria, dia afaka mahay manavaka ny kitapom-baovaony amin'ireo mpanonta hafa mba hahazoany varotra mivantana ary hanomezana vokatra sy fampisehoana tsy manam-paharoa amin'ireo mpiara-miasa aminy. Saingy tsy manao izany izy ireo - satria nifantoka tamin'ny zavatra ambaran'ny teknolojia doka fa tokony hataon'ny mpanonta fa tsy ny zavatra tena azony atao.
Diniho ny zavatra tsotra toy ny dokam-barotra gazety mamirapiratra. Ahoana no fandraisanao ny doka amin'ny pejy feno sy manjelanjelatra ary mitondra an'io traikefa io ihany hampisehoana doka? Mety tsy dia misy fomba firy hanaovana an'izany ao anatin'ny faritry ny Vovonana doka mahazatra IAB, ohatra.
Ad tech dia nanova ny fividianana doka sy fivarotana tao anatin'ny folo taona lasa. Ny sehatra fandaharana dia nanamora ny marketing nomerika amin'ny ambaratonga toy ny taloha. Nahazo ny fisondrotana izany, indrindra ho an'ireo masoivoho sy ny tsipika fizotran'ny doka. Saingy tao anatin'izany dia nanapaka ny ankamaroan'ny famoronana sy ny fiatraikany izay efa nahafantarana ny fampielezan-kevitra momba ny doka. Azonao atao ny mampifanaraka ny herin'ny branding amin'ny zoro mahitsizoro na ny zoro.
Mba hamoahana ny fampielezana dizitaly amin'ny ambaratonga, ny tech ad dia miankina amin'ny singa roa manakiana: ny fanarahana fenitra sy ny fanamboarana. Samy manakana ny fahombiazana sy ny famoronana amin'ny fanaovana dokambarotra nomerika. Amin'ny alàlan'ny fampiharana ny fenitra henjana amin'ny haben'ny famoronana sy ny singa manan-danja hafa, ny doka tech dia manamora ny fampielezan-kevitra nomerika amin'ny tranonkala misokatra. Ity dia tokony hampahafantatra ny fanolorana ny lisitra fampirantiana. Raha ny fahitan'ny marika iray dia mitovy daholo ny inventy rehetra, mampitombo ny famatsiana ary mampihena ny fidiram-bolan'ny mpitory.
Ny sakana ambany amin'ny fidirana amin'ny sehatry ny famoahana nomerika dia nahatonga ny fipoahan'ny tahiry niomerika, ka vao mainka sarotra ho an'ny marika ny manavaka ny mpanonta. Ireo tranokalam-baovao eo an-toerana, tranokala B2B, tranokala misy ary na dia bilaogy aza dia mifaninana amin'ireo orinasan-tserasera lehibe kokoa ho an'ny dolara fanaovana dokam-barotra. Miparitaka izaitsizy tokoa ny fandaniana doka, indrindra rehefa manaikitra ny mpampivelona, ​​manasarotra ny fiainana sy ny famoahana ny mpampanonta kely - na dia mety ho marika tsara kokoa sy kendrena kokoa amin'ny marika nomena aza izy ireo.
Mandritra ny diany mihazakazaka miaraka amin'ny haitao doka, ny mpanonta dia nahafoy tombony lehibe nananany tamin'ny ady amin'ny fidiram-bolan'ny doka: Fahaleovan-tena tanteraka amin'ny tranokalan'izy ireo sy kit kitay media. Ny ankamaroan'ny mpanonta dia tsy afaka milaza am-pahatsorana fa misy na inona na inona momba ny orinasany, ankoatry ny haben'ny mpihaino sy ny atiny mifantoka, izay mampiavaka azy.
Ny fahasamihafana dia zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny fifaninanana eo amin'ny orinasa; raha tsy misy izany dia maizina ny vintana hivelomana. Izany dia mamela zavatra lehibe telo tokony hodinihin'ny mpanonta sy ny mpanao dokam-barotra.
Hisy filàna matotra hatrany amin'ny varotra mivantana - Raha te handefa fampielezan-kevitra misy fiantraikany be amin'ny Internet ireo marika, dia mila miasa mivantana amin'ny mpanonta izy ireo. Ny mpanonta tsirairay dia manana fahefana hanamora ny fampielezan-kevitra izay tsy azo hamidy amin'ny Internet. Ny hoditry ny tranokala, ny tsindry bokotra ary votoatin'ny marika dia ny sasany amin'ireo fomba tsy dia maharitra loatra izay anatanterahana izany ankehitriny, fa ny fisian'ny safidy dia hitombo amin'ny taona ho avy.
Hahita fomba hanitarana fanolorana fanomezana ny mpamorona Savvy - Ireo mpanonta mahay dia tsy hiandry marika hametraka hevitra ho an'ny fampielezan-kevitra misy vokany be. Hodinihin'izy ireo am-pahavitrihana hevitra vaovao, ary hahita fomba hampiasana azy ireo ao anaty kit sy fampahalalam-baovao izy ireo. Ny vidin'ireto fanatanterahana fanentanana ireto dia tsy isalasalana fa ho tonga lafo indrindra, fa ankoatry ny ROI ambonimbony kokoa dia hahena ny vidin'ny fampielezan-kevitra toy izany. Na aiza na aiza misy ny fotoana ahafahana mampihena ny vidiny eny an-tsena, dia hiditra an-tsehatra ny mpanome tolotra mikorontana.
Ireo mpanonta sy mpivarotra dia hahita làlana hanaterana fampielezan-kevitra miantraika amin'ny vidiny ambany - Tsy ny mpanonta na ny marika rehetra no manana teti-bola hamoronana fampielezan-kevitra manokana. Rehefa manao izany izy ireo dia mety hisy ny fandaniana sy ny vidin'ny fampandrosoana tsy ampoizina. Rehefa mandeha ny fotoana, ireo orinasa mpamorona antoko fahatelo dia hahita fomba hanamaivanana ireo olana ireo amin'ny alàlan'ny famolavolana safidy mamorona ivelan'ny talantalana izay azon'ny mpanonta sy ny mpanao dokam-barotra hividianana karazana vokatra sy fahombiazana izay ho sarotra amin'izy ireo raha tsy izany.
Ny fahaleovan-tena amin'ny fanaovana sorona mba hiankohoka amin'ny adtech dia tolo-kevitra very
Ny tahan'ny tsindry avo indrindra, ny ROI ary ny fiatraikan'ny marika dia samy nisy fiatraikany ratsy tamin'ny fanarahana ny fenitra sy ny fanodinana takiana mba hampandeha ny doka. Izany dia mamela fotoana vaovao hisokatra ho an'ny mpanonta sy mpivarotra hamerina ny famoronana sy ny fahombiazana izay nananan'izy ireo taloha.
Ireo mpanohana ny haitao doka dia tsy isalasalana fa hiady hevitra amin'izany dokambarotra fandaharana Sady tsy azo ihodivirana no zavatra mahafinaritra ho an'ny mpanonta sy ny mpanao dokambarotra satria mampihena ny vidin'ny varotra izy io ary manome mpanonta maro hafa ny pie. Ny fenitra dia takiana ara-teknika fotsiny hampandehanana izany asa izany.
Mampisalasala ny hanaovan'ireo mpanonta (ireo mbola mijoro ihany), amin'ny fanekena am-po. Ny fahombiazan'i Adtech dia ny famoahana ny loza. Fa anjaran'ireo mpanonta ireo ihany no mitady fomba hiadiana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fomba fanaony amin'ny varotra doka.
Tags: fampielezan-kevitra dokamandany dokavondrona dokaadtechmpanao dokam-barotrafamoronana teknolojiaIABdokambarotra fandaharanahabe doka mahazatrahabe fanaovana doka mahazatra
Kenny Katzgrau no CEO an'ny Doka Broadstreet ary ny mpanoratra Tombony folo: Ahoana no handresen'ny Mpanonta Gazety sy Hyperlocal amin'ny vanim-potoana Google sy Facebook.
Enti-milaza: Analytics amin'ny mpanjifa miaraka amin'ny fahitana azo ampiharina
MetaCX: Tantano ny fiaraha-miasa amin'ny mpanjifa miaraka amin'ny varotra miorina amin'ny vokatra